EPS Machinery Factory | China EPS Machinery Manufacturers, Suppliers
Nchekwa onwe Nkọwapụta
Auto Eps Ọdịdị Nkedo Machine
Auto Ọdịdị Nkedo Machine (Elu oru oma Type)
Auto Eps Block Nkedo Machine
Eps / Epp Ebu
Eps / Epp Ngwa
Eps / Epp Ihe onwunwe na Production Line
Auto EPP / ETPU / EPO igwe
Auto Shape Nkedo Machine na agụụ
Ngọngọ tingcha Machine PSC2000-6000A
Auto Air Block Nkedo Machine PSB2000-6000F
1. Ngwaọrụ nwere usoro siri ike.
2. Jiri PLC na njikwa ihuenyo mmetụ, na-agba ọsọ na akpaghị aka.
3. Gụnye hopper siri ike.
4. Jiri asụsụ dị iche iche na-arụ ọrụ, dịkwuo mfe ịrụ ọrụ maka ndị ọrụ.
5. Jiri akpaka ibuga na ibu usoro.
6. Jiri ezigbo mma akụkụ.
7. Kwesịrị ekwesị iji mee ka ngwaahịa abụọ dị ala.
Auto agụụ Block Nkedo Machine PSB2000-6000Z
4. Nnukwu oru oma agụụ iji mee ka ngwaahịa dị mma.
5. Jiri asụsụ dị iche iche na-arụ ọrụ, dị mfe iji rụọ ọrụ maka ndị ọrụ.
6. Jiri akpaka ibuga na ibu usoro.
7. Jiri ezigbo mma akụkụ.
8. Kwesịrị ekwesị iji mee ka ngwaahịa abụọ dị ala na nnukwu njupụta.
3. Jiri ụkwụ siri ike dochie ikpo okwu na ụlọ ọrụ ndị ahịa.
6. Hopper abụọ kwụ ọtọ maka imeju ihe ngwa ngwa.
Akụkụ ndị bụ isi 1.Egwuregwu na-eji ígwè dị elu ejiri aka dị elu, mgbe usoro iwe ọkụ, nhazi nhazi, iji hụ na igwe ahụ nwere usoro siri ike, ọ bụghị nchara ma mee ka ọrụ igwe na-arụ ọrụ. Schneider ihuenyo mmetụ njikwa. Usoro mmepụta niile na-arụ ọrụ na akpaghị aka. 3.Maịji na sistemụ nrụgide dị elu, na-enye ngwa ngwa ngwa ngwa, igwe nwere ike iwunye 36 pc na-ejuputa egbe 4.Machine na ...
SPY70 \_ 90 \_ 120 Na-aga n'ihu-gbasaa
Ihe Njirimara 1.Feeding, expander, filtrating, crushing, iga na silos na-akpaghị aka 2.Na mbido nke mbụ na nke abụọ, oge mbụ na-ejuputa ịgbanye ngwaọrụ nri na-atụgharị uche, na-ekwe nkwa nkwụsi ike nke nri 3.Uniform foaming, foam foam wide bụ 6- 35g / l 4.Mmallerial n'ime na n'èzí, ihe ndina bedized nke a na-eji igwe anaghị agba nchara, iji kwado ọrụ na-adịgide adịgide na arụmọrụ arụmọrụ 5.Electrical protection device 6.Adopt Japanese na-ebelata valvụ
SPJ50 \_ 70 \_ 110 \_ 130 \_ 150 \_ 160 Akpaaka Ogbe EPS Pre-expander
Ihe ndị dị na 1.Feeding, expander, filtrating, transport to silos automatically 2.Steam system na-achịkwa nrụgide na-ebelata valvụ na valve oche, iji nweta kpo oku ziri ezi ikike nke ihe na-afụ ụfụfụ, iji hụ na ụfụfụ ụfụfụ ahụ ọ bụla 4.Use PLC njikwa na ihuenyo mmetụ, nweta kpọmkwem akpaka ọrụ 5.Feed gbọmgbọm nke igwe anaghị agba nchara. Ọdụdọ mmiri, valvụ ar ...
Auto Block Cutting Machine PSC2000-6000C
Ihe ndị dị na 1.Minjin gụnyere uru niile nke igwe ụdị, yana usoro siri ike, nnukwu ikike ịgbanwe ọkụ, njikwa ọsọ ọsọ ọsọ, wdg. na-achịkwa ngwaọrụ. Ọtụtụ wires ịcha ọnụ, ọsọ na voltaji kemeghi.
Ihe Ndị Dị Mkpa 1. Igwe igwe na-eji ike dị elu nke tube na ígwè mee ihe, na-eji usoro siri ike, ọdịdị mara mma 2.Machine nwere ihe ntanetị, nke kwụ ọtọ, na nke na-egbu ihe, ụzọ ntụgharị atọ 3.Machine na-achịkwa njikwa ọsọ nke ọsọ ụgbọ ala, nnukwu ọsọ ọsọ mmegharị, mmegharị na-adị nwayọ na obere mkpọtụ 4.Minji jiri 10 KVA onye ntụgharị, nnukwu mgbanwe nhazi, ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ
CNC Machinecha Machine PSC2000-4000D
Ihe Ndị Dị Mkpa 1.Minye isi etiti ejikọtara site na nchara siri ike na ihe mgbakwunye pụrụ iche dị iche iche, mmegharị siri ike, na-achịkwa n'ụzọ ziri ezi 2.Machine na-eji mgbatị moto, na-eme ka ije dị mma, ọsọ na-agbanwe na akpaghị aka. Igwe a kwesiri ka igbutu ihe eserese puru iche, chịkwaa ihe ziri ezi na 0.5 mm 3.Minji na-eji ihe ntụgharị 3 kw, site na elektrọnik elektrọnik elektrik, mmeputa volta nke 0-70 v kemeghi, nwere ike iwunye waya iri abụọ, bepụ pc 20 nke otu ihe nlere n'otu oge 4. Igwe ...
Onye njikwa ahia mba ofesi: John Chen
N'ọnwa Ọktọba nke 2019, ụlọ ọrụ Welleps na nke ...